November 8, 2020 - Padaethar
(8-11-2020 မှ 14-11-2020)ထိ (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာ ကံကြမ္မာဟောကိန်း
November 8, 2020 by Padaethar
တစ်ပတ်စာခုနှစ်ရက်သားသမီးကံကြမ္မာဟောကိန်း (8-11-2020 to 14-11-2020) တနင်္ဂနွေသားသမီး…. မထင်ထားသော ငွေကြေးကြားပေါက် ဝင်လာပါလိမ့်မည် ။စက်ပစ္စည်း အဝင်မခံသင့်သောကာလပါ ။စက်ပစ္စည်းဝင်ပါက စက်ပစ္စည်းကြောင့်ပင် မတော်တဆ ထိခိုက်မိတတ်ပါသည်။ သွေးထွက် သံယိုဖြစ်တတ်ပါသည် ။ဆူးပါသောအပင်များ အိမ်ရှေ့မစိုက်မိပါစေနှင့်။အပင်ကြီးလာလေလေ အတိုက်အခံ ရန်များလာလေလေဖြစ်မည် ။ ငယ်ရွယ်သူများ ပညာရေးအထူးကောင်းပါသည်။ သင်တန်းအသစ်တွေလည်း တက်ရတတ်ပါတယ် ။အချစ်ရေးတွင် အနေနီးသူနှင့် ချစ်သူဖြစ်မည့်ကာလပါ….။ ထီ17ပါသော ထီထိုးပါ ……။ယတြာ ……နေအိမ်ရှိ စက်ပစ္စည်းအဟောင်းများအား အရှေ့တောင်အရပ်သို့စွန့်ထုတ်လိုက်ပါ….။ တနင်္လာသားသမီး….. မမျော်လင့်ဘဲ မိမိဖြစ်ချင်သောဆန္ဒများကို အကောင်အထည် ဖော်ခွင့်ရနိူင်သော အခွင့်အလန်းကောင်းများ ကြုံရပါလိမ့်မည် ။ အိုးအိမ် အရောင်းအဝယ်ကိစ္စများ အဆင်ပြေပါမည်။ ဈေးကောင်းရရှိနိူင်သောအချိန်ပါ ။ ကျန်းမာရေးတွင် ဇက်ကြောများလေးလံ၍ မလှုပ်ချင် မကိုင်ချင်ဖြစ်နေလိမ့်မည် ။ငယ်ရွယ်သူများ အချစ်ရေးတွင် အချစ်ဟောင်းနှင့်ပြန်အဆင်ပြေတတ်သောအချိန်ပါ။ ထီ14ပါသော … Read more
အွန်လိုင်းပေါ်မှာမြန်မာစုံတွဲ ကိုယ်တိုင်ရိုက်တွေ တစ်နေ့ကို 10 ကားလောက် နေ့စဉ်မြင်တွေ့နေရတယ်…
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ…မြန်မာစုံတွဲ…ချောင်းရိုက်တွေ…ကိုယ်တိုင်ရိုက်တွေ တနေ့ကို…၁၀ကားလောက် နေ့စဉ် မြင်တွေ့နေရတယ်… အဲဒီကာယကံရှင် တွေရဲ့သားစဉ်မျိုးဆက်..အဲဒီကားတွေ မြင်တွေ့နေကြရမှာပါ…. တချိန်မှာ…ငါ့အဖေတွေ…ငါ့အမေတွေဆိုပြီး…သူတို့သားသမီးတွေလည်းမြင်နေကြ ရမှာဆိုတော့တွေးကြည့်ရင်….ပြသာနာအကြီးကြီးတွေပါ။ မသိနားမလည်တဲ့ ညီမလေးများအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ မြင်ရတွေ့ရတာတွေ စိတ်မကောင်းစရာတွေမို့ပါ… တစ်နေ့တစ်နေ့ ချက်ဘောက်ရီကွက်စ်ထဲမှာ လာအကြံဉာဏ်တောင်းကြတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျအများစုမှာ တူညီတဲ့အကြောင်းတစ်ခု ရှိပါတယ်။ ချစ်သူနဲ့ အတူနေ နယ်ကျွံကြတဲ့အခါ မှတ်တမ်းတင်ခံရတဲ့ ကိစ္စတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ ဆိုတာပါပဲ…. အချို့ဆို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဒီလူကို ဆက်လက်တွဲဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့တာတောင်မှ ဒီလိုRecordတွေ ပေါက်ကြားမှာစိုးရိမ်လို့ ကြိတ်မှိတ်ရှေ့ဆက်နေရတာတွေ…. အချို့ဆိုရင် လုံးဝပြတ်သွားပြီး သူ့စော်နဲ့သူ၊ ကိုယ့်ဘဲနဲ့ကိုယ် ဖြစ်နေတာတောင်မှ လှမ်းခေါ်ရင် သွားအိပ်ပေးရတဲ့ အခမဲ့ပြည့်တန်ဆာဘဝကို ရောက်မှန်းမသိ ရောက်နေရတဲ့ ရင်နာစရာ ဖြစ်ရပ်တွေ တကယ်ကြီးကို ရှိနေတာပါ…. အခုနောက်ပိုင်း အင်တာနက်မှာ မကြာခဏ ဆက် Tape တွေ … Read more
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ…မြန်မာစုံတွဲ ကိုယ်တိုင်ရိုက်တွေ တနေ့ကို…၁၀ကားလောက် နေ့စဉ် မြင်တွေ့နေရတယ်…